Thwebula Twitch 4.14 – Vessoft
Ukudikiza – a isofthiwe ukubuka ividiyo umfudlana imidlalo computer nokududuza. Isofthiwe ikuvumela ukuba babukele Gameplay anjalo imidlalo othandwayo: Minecraft, FIFA, League of Legends, Dota 2, Counter Strike-, Diablo, Starcraft njll Twitch kwenza ukuthola ukusakaza by the game noma igama channel and ukuxhumana in chat nabanye abasebenzisi ngesikhathi ebuka video. Isofthiwe kunikeza izinga okusezingeni of izithombe zingancishiswa ukusindisa traffic noma ukuvimbela nqabela of ukusakaza. Ukudikiza futhi ikuvumela ukuba wenze subscription premium kusiteshi eyenza ukukhubaza izikhangiso futhi abukeze amarekhodi ukusakazwa esidlule.
Izinga okusezingeni of image
A lot of imidlalo sibukwe
Ukucinga by game noma igama kusiteshi
Ukuxhumana in chat
Amazwana on Twitch:
Twitch Ahlobene software: